Trano fisakafoanana miasa ao amin'ny JLT amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Trano fisakafoanana miasa ao amin'ny JLT amidy any Dubai
ByOmar El Jurdi
PostedJona 21, 2021
1. Niorina tamin'ny: o 2019 (Miasa mandritra ny 2 taona) 2. Mpiasa maharitra ananan'ny orinasa? o 10 3. Famaritana trano fisakafoanana amin'ny tsipika iray. o Trano fisakafoanana miasa ao amin'ny JLT, misy mpanjifa 60, miaraka amina farihy fijery sy foto-pisakafoanana roa. o Voalohany ...
Date : Jona 21, 2021
1. Niorina tamin'ny:
o 2019 (Miasa mandritra ny 2 taona)
2. Mpiasa maharitra ananan'ny orinasa?
3. Famaritana trano fisakafoanana amin'ny andalana tokana.
o Trano fisakafoanana miasa ao amin'ny JLT, misy mpanjifa 60, miaraka amina farihy fijery sy foto-pisakafoanana roa.
o Hevitra voalohany:
Ny fihinananan'i Lebaney Street amin'ny endriny tena izy. Sakafo mahafinaritra amin'ny foto-kevitra momba ny sakafo, miaraka amin'ny fandefasana tena ary miaraka amin'ny mpanangona.
o Hevitra faharoa:
Fivarotana pizza italianina vaovao marina (fanaterana irery ihany), mifantoha amin'ireo akora italiana telo lehibe:
4. Hevitra misongadina ao amin'ny orinasa:
o Trano fisakafoanana miasa feno, hita ao amin'ny iray amin'ireo sampahony be atao indrindra ao amin'ny JLT.
o Seza hatramin'ny 30 ao an-trano sy 30 any ivelany misy terasin'ny fahitana an'ny farihy (azo ampitomboina ny terraces mifanaraka 30 hafa).
o Ny trano fisakafoanana amin'izao fotoana izao dia manana foto-kevitra roa, miaraka amin'ny iray ho lakozia maizina / virtoaly.
o Ny hevitra voalohany dia ny Lebanety Street Eatery (miaraka amin'ny lovia isan'andro) ary ny pizzeria Italiana tena izy.
o Ny trano fisakafoanana dia voafafy tsara, amin'ny endrika maoderina sy tsy mitongilana, ny fiheverana ny antsipirian'ny hevitry ny sakafo.
o Mpiasa manana traikefa sy sariaka ny trano fisakafoanana.
o Mpandresy ny loka JLT Dinning.
o Afaka miaraka amin'ireo mpanangona sakafo lehibe rehetra izahay.
o Manana ny rindrambaiko manokana sy manafatra tranonkala izahay hampiroboroboana ny famandrihana mivantana.
o Mavitrika amin'ny haino aman-jery sosialy, miaraka amin'ny mpanaraka mihoatra ny 3000.
o Eo anelanelan'ny 4.1 hatramin'ny 4.7 kintana naoty amin'ny mpanangona sakafo sy ny hevitra ao amin'ny google
o Kaomandy fandefasana maherin'ny 60,000.
o Amin'izao fotoana izao 35% ny vola miditra amin'ny varotra dia avy amin'ny fandefasana sakafo an-trano sy 65%. Areti-mifindra mialoha ny kobaidana, nahazo sakafo enina in-60 sy fanomezana 40% izahay.
o Misakafo hariva misakafo mandritra ny ora fisakafoanana noho ny tilikambo fandraharahana, ary fisakafoanana antonony mandritra ny andro herinandro noho ny tilikambon'ny mponina.
o Marika marika amidy any UAE.
o Databola ho an'ny mpanjifa mihoatra ny 15k.
o Ny fananana dia misy: Fitaovana ao an-dakozia sy vata fampangatsiahana, fanaka FOH, Fitoeran-tseranana AC roa miisa 2 sy kojakoja, ekolojia, Unit Air Segera, milina POS, Fipetrahana ivelany, Fahazoan-dàlana, fahazoan-dàlana hipetraka eny ivelany, Ady amin'ny afo sy fitaovan'ny lakozia Hood, Audio / Video / Rafitra IT Network, Design Interiors, Database ho an'ny mpanjifa, APP famandrihana an-tserasera
5. Tanisao ny vokatra rehetra ao amin'ny orinasa:
o Salady mahasalama, Sakafo maraina, Appetizers Libaney, Manakeesh, Sakafo isan'andro, fonosana, lovia, burger, zava-pisotro mangatsiaka sy mafana (fisotroana legioma sy legioma no misy). Ho an'ny pizza pizza italiana dia manolotra pizzas italianina sy sakafo mahasalama izahay.
o Ny hevitra fanampiny toy ny hevitra mahasalama sy ny keto dia azo raisina ho lakozia mainty na virtoaly. (Tsy ampahany amin'ny fifanarahana, fa raha ny mety ho mpividy dia manana ny foto-keviny manokana, afaka mampifanaraka sy mamokatra avy amin'ny lakozia iray ihany izy)
6. Faritra namboarina sy antsipirian'ny fanofana / fanofana:
o Ny haben'ny trano fisakafoanana dia manodidina ny 100 metatra toradroa ao anaty trano sy 40 toradroa any ivelany. Ny trano fisakafoanana dia ampanofaina 120,000 XNUMX aed amin'ny fanofana isan-taona, miaraka amina endrika maoderina sy tsy mitongilana.
o Ny seza ivelany dia mijery ny farihy.
7. Fotoana COVID-19 ankehitriny, ny varotra isam-bolana isam-bolana:
8. Margin EBITDA:
9. Ny sandan'ny fananana ara-batana an'ny orinasa:
10. Vidy amidy:
o 1,000,000 aed miaraka amin'ireo fananana voatanisa etsy ambony
11. Tapitra ny fahazoan-dàlana amin'ny varotra:
o 4 aprily 2022
12. Salanisan'ny fanjifana DEWA:
13. Haben'ny lakozia sy bar / Counter: 60sqm
14. Haben'ny FOH: 40sqm
15. Haben'ny seza ivelany: 40 sqm
Mpiasan'ny fananan'ny paroasy # andrew
Salon salon # hatsarana amidin'ny tompony
#business amidy wirral
#fototra fivarotana amidy
# vidin'ny franchise manadio
trano fivarotana #hidiana amidy eo akaikiko
# orinasa hamidy
# hamita microbrewery amidy
Fahafahana mivarotra #direct
Orinasa #fambarotana amidy
#franchise latsaky ny 15k
Orinasa mpivarotra # mpivarotra amidy
#hps agents agents
fananana #kennel amidy
agents agents an'ny trano fivarotana #kjt
# mitady ny fahafaha-miasa
Orinasa mpampanjifa # fanafody amidy
Fahafahana orinasa # tapitrisa dolara
Trano fisakafoanana miasa # amidy
Toeram-pisakafoanana miasa any Dubai
Trano fisakafoanana miasa # amidy any uae
franchise #popeyes amidy
#fividianana orinasa efa misy
Trano fisakafoanana #Running Operational amidy any Dubai
Fahafahana franchise franchise kely
#manombohana orinasa manao franchise
# fanazaran-tena amin'ny varotra amidy
Trano fisakafoanana #Well Running Operational amidy any Dubai